Kitra any Eoropa – «Ligue des champions» : samy nandresy avokoa ireo ekipa goavana | NewsMada
Kitra any Eoropa – «Ligue des champions» : samy nandresy avokoa ireo ekipa goavana
Tontosa, ny alarobia lasa teo ny lalao mandroso amin’ny andro fahatelo, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”. Voahaja aloha, hatreto, ny lojika satria samy nahazo fandresena avokoa ireo ekipa goavana.
Tsy nisy nanelingelina ireo ekipa lehibe, nandritra ny fanatanterahana ny fifanintsanana ho an’ny andro fahatelo, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”. Fihaonana, notontosaina ny alarobia lasa teo. Samy tafavoaka ho mpandresy avokoa izy ireo, tamin’izany.
Anisan’ireny ny nanamontsanan’ny Paris St Germain ny Anderlecht, tamin’ny isa mavesatra 4 no ho 0. Nanjakan’ny Parizianina tanteraka ny fihaonana. Nanantombo teo amin’ny lafiny rehetra ry zareo, na teo amin’ny fiarovantena, na teo amin’ny fanafihana sy ny tanjaka teny ambony kianja. Raha fintinina, toy ny nanao fanazarantena fotsiny ny Frantsay, nanoloana ny ekipan’i Belzika.
Vao nanomboka 3 mn dia efa nanakobana ny harato i Mbappé, tamin’ny alalan’ny fahaizana manokan’ity mpilalao ity. Mbola nampian’i Cavani izany, 1 mn tsy hialana sasatra. Samy nahafaty baolina daholo kosa i Neymar (66 mn) sy i Di Maria (88 mn), teo amin’ny fidirana faharoa.
Nomontsanin’ny Bayern i Celtic
Tsy nanana olana ihany koa ny FC Barcelone, raha nikatroka tamin’ny Olympiakos. Nandresy, tamin’ny isa 3 no ho 1, ry zareo Espaniola, tamin’io. Anisan’ny nahafaty baolina i Messi sy i Digne. Nomontsanin’ny Bayern de Munich, tamin’ny isa mazava, 3 no ho 0, ihany koa ny Celtic ka anisan’ny nampiditra baolina, tamin’io, i Muller, teo amin’ny minitra faha-8 ary ny an’i Kimmich, teo amin’ny minitra faha-29 ary nofaranan’i Hummels, teo amin’ny minitra faha-51, izany.
Tamin’ny isa tery, 2 no ho 1, kosa ny nanilihan’ny Juventus de Turin, ny Sporting. Ady sahala, 3 no ho 3, kosa ny nisarahan’ny Chelsea sy ny AS Roma. Hithy ny talata 31 oktobra sy ny 1 novambra ho avy izao ny andro fahefatra amin’ity “Ligue des champions”, ity.